छोरीको आशामा १३ छोराको जन्म, अझै पनि छोरी जन्मिनेमा आशंका ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार छोरीको आशामा १३ छोराको जन्म, अझै पनि छोरी जन्मिनेमा आशंका !
छोरीको आशामा १३ छोराको जन्म, अझै पनि छोरी जन्मिनेमा आशंका !
on: २७ आश्विन २०७५, शनिबार १२:३१ In: समाचारTags: No Comments
काठमाडौँ । छोरा जन्माउने आशामा कुनै दम्पत्तीले ६र७ जना छोरीको जन्म दिएको घटना हाम्रा लागि साधारण हुन् । ब्राजिलका एक दम्पत्तिले पछिल्लो २० वर्षदेखि लगातार छोरीको आशा गर्दै अहिलेसम्म १३ छोराहरु जन्मी सकेका छन् ।
यी दम्पत्तीका सबै छोराहरु १ महिनादेखि १८ वर्ष उमेर समूहका छन् । फुटबलका पारखी ४० वर्षीया यी छोराहरुका बुवाले आफ्ना सबै छोराहरुको नाम फुटबल खेलाडीहरुको राखेका छन् । इरिनुए र उनकी श्रीमती जूसिसिलेडीले छोरी नजन्माएसम्म आफूहरु नरोकिने बताएका छन् ।
श्रीमती पहिलो पटक गर्भवती भएदेखि नै इरिनुएले छोरी जन्मने आशा गरेका थिए । यी दम्पत्तीले छोरीको नाम पनि जुराइसकेको बताएका छन् । यो सिलसिला १३ औं सन्तान भएपछि पनि जारी छ । दम्पत्तीका सबै छोराहरुको नाम अंग्रेजी अक्षर ‘आर’ बाट सुरु हुने दक्षिण अमेरिकी फुटबल खेलाडीहरुको नाममा राखेका छन् ।
दम्पत्तीले अघिल्लो महिना मात्र जन्मेका छोराको नाम ‘क्रिस्टियानो रोनाल्डो’ राखेका छन् । यो परिवार ब्राजिलको कानसिकाओको कोटी इलाकामा बस्ने गर्दछन् । ठूलो परिवारलाई खाना बनाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने जूसिसिलेडी बताउँछिन् । –एजेन्सीको सहयोगमा
यी भगवानरुपी छिमेकीले बनाई दिए नयाँ घर
ग्लोबल आइएमई बैंकको मिसकल बैंकिङ्ग सेवा
२७ आश्विन २०७५, शनिबार १२:३१